Sakarya Nostalgic Tram အတွက်စစ်တမ်း! | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး54 SakaryaSakarya Nostalgic Tram အတွက်စစ်တမ်းကောက်ယူမည်။
13 / 01 / 2020 54 Sakarya, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ, ဓါတ်ရထား
sakarya မှလွမ်းဆွတ် tram များအတွက်စစ်တမ်း
Sakarya Big City ၏မြို့တော်ဝန် Ekrem Yücceကလတ်ဆတ်သော tram စီမံကိန်းအတွက်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းကိုမကြာသေးမီရက်များအတွင်းကပြုလုပ်လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ မြို့တော်ကောင်စီတွင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Yuce မှပြောကြားသည်မှာနိုင်ငံသားများနှင့်ကုန်သည်များသည်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုကိုမေးမြန်းလိမ့်မည်။
ယခုနှစ်ပထမအကြိမ်ပါလီမန်အစည်းအဝေးကို Ekrem Yücceဥက္ကunder္ဌအရကျင်းပခဲ့သည်။
၆၁ ရက်မြောက်နေ့ကိုကြည့်ရှုသည့်ပါလီမန်တွင်လတ်ဆတ်သော tarmvay သည်နိုင်ငံတော်ဥယျာဉ်နှင့်ဆောက်လုပ်မည့်စီမံကိန်းများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးခဲ့သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင်ဆောက်လုပ်ပြီးစီးမည့်ဆောက်လုပ်ရေးကာလကြာမြင့်မည့် Nation ဥယျာဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Yuce က“ Millet ဥယျာဉ်သည်အပျက်သဘောဆောင်သောလေထုထဲတွင်ရှိနေသည်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သို့မဟုတ်အမျိုးသားဥယျာဉ်ကိုဖေဖော်ဝါရီလတွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်။
နိုင်ငံသားများနှင့်ကတ္တရာနှင့်ပျက်စီးသွားသောလမ်းများဖြစ်သောYücce၏မကြာခဏတိုင်ကြားမှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော Sakarya လူမျိုး၏အကြီးမားဆုံးပြproblemsနာတစ်ခုမှာ“ ကတ္တရာအကြားရှိလမ်းမလမ်းကိုမပစ်ရ။ ရောင်စုံသဘာဝကွန်ကရစ်ကိုကတ္တရာအစားပြုလုပ်လိမ့်မည်။ အဓိကလမ်းများပြန်ကတ္တရာဖြစ်လိမ့်မည်။ ပြည်တွင်း၊ စီးပွားရေးနှင့်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုသည်ကတ္တရာအစားစျေးပေါသောကတ္တရာကွန်ကရစ်ကိုသာ ဦး စားပေးမည်။
မကြာသေးမီရက်များအတွင်းစတင်ဖြန့်ချိသော Yelp သည် Belpasa S54 ၏ကြားကာလများနှင့်အတူဆက်လက်ဖြန့်ဝေသွားမည်ဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ကအကြံပေးအဖွဲ့ 500 TL ကုန်ကျသည်။ ရက် ၃၆၅ ရက်ယူချင်ပါတယ် ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့သူတွေဆီကအကူအညီရရင်နေ့စဉ်ထုတ်ယူချင်တယ်။ (Medyab ဖြစ်ပါသည်)
Sakarya Nostalgic Tram ကိုတနင်္လာနေ့တွင်စတင်မည်
Sakarya မြို့ပြရထားစနစ်စစ်တမ်းနိုင်ငံသားများ (ဗီဒီယို) tercig နှင့်အတူ adaray ခဲ့သည်
Eyüp - Bayrampaşaမီးရထားလမ်းလိုင်းနှင့် Esenler Nostalgic Tram Project …
3 ။ လေဆိပ်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. စစ်တမ်းတိုးတက်မှုကို select ရန်
လွမ်းဆွတ်လွမ်းဆွတ်ဓါတ်ရထားလိုင်းအဘယ်သူသည် Vatm အဝတ်အစားပုန်ထမ်းရန်
တင်ဒါအသိပေးချက် - Eyüp - Bayrampaşaရထားလမ်းလိုင်းနှင့် Esenler Nostalgic …
Yenicami မှ Sakarya ရှိ National ဥယျာဉ်သို့လွမ်းဆွတ်မှုရထား
လူသိရှင်ကြားကြေငြာမည့် Sakarya Nostalgic Tram Project
Sakarya မီးရထားလမ်းကိုစတင်ရန် Nostalgic Tram ဖြစ်သည်
လွမ်းဆွတ် Tram စစ်တမ်း
Sakarya Nostalgic Tram စစ်တမ်း
Sakarya Nostalgic ရထား